Fanalana ny mponina: namaly ny Collectif Tany ny minisitra Hajo A. | NewsMada
Fanalana ny mponina: namaly ny Collectif Tany ny minisitra Hajo A.
Namoaka fanambarana an-gazety ny fikambanana Collectif Tany, mikasika ny tetikasan’ny fitondram-panjakana amin’ny tsy maintsy hanesorana ny mponina amin’ny toerana maromaro any Antsiranana, any Fianarantsoa, any Toliara ary eto Analamanga. Namaly azy ireo ny minisitra Andrianainarivelo Hajo, amin’ny maha minisitry ny Fanajariana ny tany, ny trano fonenanana sy ny asa vaventy (MATHTP) azy, ny 22 marsa teo.
Nohazavainy fa mazava tsara ny fanapahan-kevitry ny minisitra, noraisina ny 27 febroary teo, mikasika ny fanesorana ny mponina amin’ny trano fonenany noho ny antony tombontsoa ho an’ny besinimaro (utilité publique).
Fandaharanasa roa miavaka tsara no voakasik’izany. Voalohany ny Fandaharanasa ho tohana sy ho fampandrosoana ny tanàna mirindra (Padeve), efa novolavolaina hatry ny ela.
Fandaharanasa hafa faharoa an’ny minisitera, ny fanajariana sy ny fiarovana ny reniranon’i Sisaony, eto Antananarivo Analamanga satria tsy azo hanorenam-ponenana.
Fanonerana ara-bola sy sosialy
Mikasika ny Padeve, efa nisy ny fanadihadiana, hatramin’ny taona 2011, mikasika ny lafiny sosialy, ny tontolo iainana ary ny lafiny teknika. Toy ny fanadihadiana ny ahafahana manatanteraka azy, sy ny drafitra lasitra mikasika ny paikady hamindran-toerana ireo olona voakasika (CPRI) nankatoavina ny taona 2016. Teo koa ny Fanadihadiana ny fiantraikany amin’ny tontolo iainana sy sosialy (EIES), sy ny Drafitrasa amin’ny famindran-toerana (PAR), novolavolaina ny taona 2018.
Amin’izao fotoana izao, efa fantatra ireo olona hafindra monina ary hahazo tamberim-bola sy hotohanana ara-tsosialy. Satria tsapan’ny fanjakana ny fatiantoka noho izy ireo very trano sy very fivelomana.
Manamarika ny minisitera MATHTP fa nanaraka amin’ny antsipiriany ny voalazan’ny lalàna mikasika ny fanalàna ny olona amin’ny trano fonenany avokoa ireo. Misy rahateo ny drafitra manokana mikasika ny fampahalalam-baovao eto amin’ny firenena sy ny any ifotony hisian’ny mangarahara.